अफगान राष्ट्रपतिले देश छोडे, राष्ट्रपति भवन तालिवानको कब्जामा, लाखौ घरबार बिहिन (भिड्यो र तस्विर सहित) - समय-समाचार
समय-समाचार सोमबार, २०७८ साउन ३२ गते, ०१:४३ मा प्रकाशित
तालिवान बिद्रोहीले अफगानिस्तानको राजधानी कावुल आफ्नो कब्जामा लिइसकेका छन् भने राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर बेपत्ता भएका छन् । तालिबान विद्रोहीले राष्ट्रपति भवन समेत कब्जा गरेर र त्यहाँ भित्र पसेर आफुले सत्ता कब्जा गरेको तस्बिरहरू समेत सार्वजनिक गरेका छन् । अस्तिसम्म घानी बसेको कुर्सीमा अहिले तालिबान बिद्रोही बसेर फोटो सेसन गरेका तस्विरहरू बाहिर आईसकेका छन् ।
तालिबानको कब्जा संगै हजारौ अफगानी महिला, बृद्ध र बालबच्चाहरू सरणार्थी भएर घर छोडेर हिडेका छन् । विभिन्न संचार माध्यममा देखाएका भिड्यो तस्विरहरू हेर्दा अवस्था दर्दनाक र दुखद देखिन्छ । अव बाचिने हो कि होईन भनेर पिडामा बसेका छन् अफगानी जनताहरु । “आज ५ दिन भयो भोक निन्द्रा सबै हराएको छ,’ एकजना अफगानी महिलाले छाती पिट्दै र रुदै भनिन ‘मैले पति गुमाए’ “। साथमा उनको ३ बर्षको बच्चा छ । एयरपोर्टमा देश छोड्ने मानिसहरुको भिड ठूलो छ ।
यो घट्नालाई लिएर कसैले पाकिस्तानलाई दोष दीइराखेका छन् भने कसैले अमेरिकाले छोड्नु हुने थिएन भन्दै अमेरिकालाई दोष दिइराखेका छन् । ‘तालिबान बिद्रोहीले काबुल कब्जा गरिरहँदा यता पाकिस्तानीहरुले स्वतन्त्रता दिवस मनाए, त्यसरी उनीहरुले कहिल्यै मनाएका थिएनन,’ स्विडेनमा बस्दै आएकी एक युवतीले बताईन। ‘अब के हुने हो ? कति महिला बलात्कृत भएर बाच्नु पर्ने हो, कति महिलाले शिक्षाबाट बन्चित हुनुपर्ने हो ?’ अनि बोल्दा बोल्दै डाको छोडेर रुन थालिन । ‘म सुत्न सकेको छैन आज दस दिन भो,’ उनले भनिन। ‘यो दुखमा पाकिस्तानीहरुले खुशी मनाएझै लाग्छ । मैले कति पाकिस्तानी साथीहरुलाई सहयोग गरे, मैले पाकिस्तान मै पनि बसेर बर्षौ समाज सेवा गरे। आज मेरो देशमा यस्तो हुँदा एउटा पाकिस्तानी साथीबाट साहानाभुतिको शब्द पाईन । ‘
२० बर्ष अगाडि तालिबान बिद्रोही बिरुद्द लड्न अमिरेकी सेना अफगानिस्तान पुगेको थियो । बर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडनको अमेरिकी सेना फिर्ता आउने कुरा भएको १० दिन भित्रै तालिवानले काबुल र राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेका हुन् । वाईडन भन्छन ‘यति चाडै राष्ट्र असफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। ‘
अब के हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ । के अमेरिकाले अरु छिमेकी देशहरुसंग मिलेर मानव अधिकारको पक्षमा वा तालिवान विद्रोहीको बिरुद्धमा लड्ला त ? हेर्न बाँकी छ ।
जहाँ जे भए पनि संसारका सबै देशहरु मिलेर मानव अधिकार उलंघनको बिरुद्ध लड्नु अति नै आवस्यक छ । निर्दोष महिला र बच्चाहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र पाउनु पर्ने शिक्षाको पक्षमा एकजुट भएर लड्नु अनिबार्य छ । यदि कुनै देशले आफ्नो देश भित्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन र त्यसको कारण हजारौ निर्दोष नागरिकहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्छ भने त्यहाँ बाहिरि देशले आफ्नो उपस्थिति जनाएर समस्याको समाधान गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।